Dhizaini, kuvaka, mitemo uye ongororo yemarudzi ese eMitambo - Ikkaro
kudzidziswa >> Mitambo
Wese munhu anoda mitambo. Uye yakanaka bhodhi mutambo zvikorekedzo. Kana iwe uri mutambi iwe uchafarira chikamu ichi. Ini ndiri nyore hobbyist uyo ari kuyedza kuwedzera uye kuwedzera zvinhu.
Pfungwa iyi kupatsanura chikamu ichi muzvikamu zvinoverengeka. Kune rimwe divi, ongororo yemitambo yandiri kuyedza, kune rumwe rutivi, kugadzirwa kwemitambo uye pakupedzisira kuvaka kwavo, kuteedzera, kugadzira zvikamu, ndezvipi zvinhu zvekushandisa, nezvimwe. Zvese DIY kubva kumitambo.
Parizvino apo ini ndine ruzivo rwakawanda mukusarudza zvinhu uye matekiniki ekuvaka zvinhu izvo zvinogona kushandiswa kuwedzera, kugadzira kana kugadzirisa mitambo.
Uye zvakare, pachave nenzvimbo yenhoroondo, mitemo, ruzivo uye zvidzidzo zvekuvakwa kwemabhodhi, zvidimbu, nezvimwe zvemitambo yakasiyana yatinobata nayo, kubva kuma Classics Chess, Backgammon, Mankala, online Puzzles, kusvika kune epamazuva ano vamwe.
Chikamu chakakosha che Dhinda uye Tamba ;-)
Yetsika mitambo yemapuranga yezviitiko zvekunze uye mapato
Ndakatosangana kaviri gore rino na Mitambo yechinyakare uye zviitiko zvekukwira zvevana panguva yezviitiko pamitambo yemusha. Iyi mitambo yakagadzirwa nematanda, yakanyanya kukosha uye yakapusa zvinhu asi ivo vanoida. Vamwe kutamba vega uye vamwe kuzviita vari vaviri vaviri kana sechikwata
Ndiri kuda kukwirisa zvimwe kuitira kuti zhizha rigone kutamba nevanasikana vangu uye nevanin'ina vangu, ndichishandisa mukana wematanda atinawo ari kukuvadzwa nekuve panze. Ichi chinyorwa mubatanidzwa weavo vandakakwanisa kutora mifananidzo uye yeavo vandinoyeuka. Paive nezuva apo paive nevanhu vakawanda zvekuti ndakatadza kutora mifananidzo. Mumitambo yese tinogona kuita kuwanda kwemisiyano mese mumitemo uye misiyano mukuvaka. Iwo manotsi akafanana sechiyeuchidzo.
Unogona kuve neakanaka gymkhana nezvose izvi. Ini ndinopatsanura mitambo kuita maviri, ayo ehunyanzvi uye ayo ari mota nekuyera zviitiko.
Jenga Rules (Maitiro Ekutamba Jenga)
Jenga Inotambwa nematanho makumi mashanu nemashanu emapuranga, ayo akareba kakapetwa katatu paupamhi. Mabhokisi acho akarongedzwa achigadzira shongwe. Uriri hwese hune zvidhinha zvitatu, uye uriri hwepamusoro hwakaiswa zvakaringana. Naizvozvo kumagumo kune 54 pasi. Asi izvi zvinotaridzika zviri nani nemufananidzo.
Kana iwe uchida mutambo, zvirokwazvo uchadawo Suspend
Kana iyo shongwe yavakwa, munhu akavaka shongwe anotanga mutambo. Pano mafambiro anosanganisira kutora block kubva chero pasi uye nekuisa zvakatsetseka pamusoro peshongwe. .
Dhinda & Tamba, bhodhi yemitambo gadzira uye DIY tsika
Mavhiki mashoma apfuura pa twitter ndakataura kuti vandiwana hunyanzvi hwePrinta & Tamba, uye kubvira ipapo ndanga ndichiita imwe tsvagiridzo kuti ndione izvo zvinopihwa nenyika ino uye kana zvichinakidza kuiwedzera kune iyo Mitambo chikamu
Iyo Dhinda uye Tamba Ini ndakapfuudza kune kugadzirwa kwemabhodhi mitambo mune zvese uye ndawira murudo, ini handina kuzvifungidzira izvo mumitambo yebhodhi pane zvakasikwa zvega zvakatsaurirwa kuna DIY.
Chakanyanya kundishamisa ndechekuti nhamba hombe yemibvunzo uye kusahadzika kunowanikwa nevanhu pavanogadzira zvidimbu ini ndinokwanisa kugadzirisa uye / kana kuraira. Gadzira zvidimbu nezvinhu zvakachipa, shanda zvinhu zvakasiyana, nezvimwe. Ndanga ndichiverenga uye ndichinyora nezve izvi zvese kwenguva yakareba, iwe unofanirwa kungoishandisa kune iyo bhodhi yemutambo kusikwa.
Cube yaRubik 2 × 2 inovakwa nevana
Mavhiki mashoma apfuura, David, mudzidzisi wepuraimari, akandinyorera achindibvunza kana ndichigona kuvabatsira ne 2 × 2 rubik's cube dhizaini yevana.
Vaida kugadzira masvomhu chirongwa chevana vakakomberedza cube raRubik . Ndakabva ndangomutumira zvinhu zvekuvaka magnetic rubik's cubes ane dice, the 2 × 2 and the 3 × 3 asi zvido zvavo zvaive zvakasiyana uye vakauya nenzvimbo dzakareruka.
Inofanirwa kuvakwa nevane makore gumi, saka tinokanganwa nezve zvakawandisa uye zvine ngozi maturusi nemaitiro
uye inofanirwa kuve yakachipa, yakachipa kwazvo
kunyange hazvo zvese zvichizofanira kutaurwa, ivo vaingoda chete cube isinganetsi.
Mhinduro yangu ndeiyi 2 × 2 Rubik's cube yemakadhibhodhi uye magineti mapepa Uye kana iwe ukaitira kirasi zvinodaira € 1,5 pa cube zvingangoita, kana iwe uchingoda kuita imwe iwe unokwira kusvika ku € 3 kana € 4
Iyo enigma yeasere masere ayo aida kuve 8
Isu takagara kwenguva refu tichitumira zvirahwe, zvirahwe, mitambo kana teki dzehuropi neChishanu. Izvi zvinofanirwa kuve nyore nekuti ... Ramba uchiverenga
Chakaipa chakavanzika chekubvisa kwe3
Uye kuti iwe uve nevhiki yakanaka ndinokusiira ichi chidiki chemasvomhu icho kunyangwe hazvo chisina kuoma ... Ramba uchiverenga
Maitiro ekugadzira cube ya1x2x3
Rubik's Cube hack kuti ukwanise kutamba ne3x2x1 cube Iyo iri, inonakidza kwazvo, heheej.
Maitiro ekugadzira cube yemagineti rubik nedhaisi
Unoda izvi magnetic Rubik's cube yakagadzirwa nemadhizai?
Zvakanaka, kuzviita kuri nyore kupfuura zvinoita ...
MIT - iro rakakiya bhaibheri
Isu tinonamatira iyo dudziro yeMIT, gwaro rinoonekwa se Lockpicking Bhaibheri.
Kunyangwe kana iwe uchida chimwe chinhu chinonzwika zvirinani, iri gwaro rinokosha for the kutanga kukiki. Icho chidzidzo chinobata pfungwa dzangu. Kana iwe ukataura nezve locksmith inogamuchirwa zvachose, asi kana izwi kukiya rikaonekwa, zvinoita sekunge uchapara mhosva. Asi isu tichataura nezve izvi rimwe zuva ;-)
Nebhuku iri iwe uchadzidza
Nhasi nemukana ndawana rangu ESO Dhizaini uye Tekinoroji bhuku rakanyorwa naJames Garratt kubva kuna Akal Ediciones. ... Ramba uchiverenga
Peji1 Peji2 Zvadaro →